Izimali, Izimali zomuntu
Kiwi (QIWI) esikhwameni - omunye ethandwa kakhulu yesimanje imali inzuzo. Kusadingeka ungayisebenzisi izinkokhelo electronic? Izame - akuve elula! Kukhona izinhlelo zokukhokha eziningi, ezifana ikiwi-esikhwameni, Yandex.Money, WebMoney nabanye abaningi. Lapho ukhokha zonke izinhlobo intanethi, lapho iyala izimpahla ezitolo inthanethi, kanye ukubuyiswa kwemali imali, ubuyise i-akhawunti efonini ngaphandle kwabo awukwazi ukwenza namuhla. Uma ufuna ukugcina izikhathi usebenzisa impumelelo yesimanje eklanyelwe ukuba uyiduduze ezimpilweni zethu, kumelwe sifunde ukusebenzisa amasistimu e-elekthronikhi yokukhokha. Omunye ethandwa kakhulu - Kiwi esikhwameni. Ubelokhu egijima kusukela ngo-2006 futhi kuyanda unyaka ngamunye.
Indlela yokusebenzisa ikiwi-esikhwameni - ukubhaliswa
Ngakho, ngemva kahle isayensi okulula usebenzisa i isikhwama electronic. Ngaphambi kokusebenzisa i-Kiwi-isikhwama, udinga ukuba babhalise ohlelweni Kiwi. Ungenza lokhu kwi website esemthethweni. Ukuze wenze lokhu, kudingeka ukhethe "Bhalisa" ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini uhambe ngenqubo elula. Faka inombolo yakho yeselula ngefomethi edingekayo (ngaphandle "eziyisishiyagalombili"), lezi izimpawu uvumelane nemigomo ye-sipho. Cishe ngokushesha ngemuva kokuba uchofoze "Bhalisa" nawe ku ikhodi yakho ephathekayo isiqinisekiso sondela which Uzodinga ukufaka emasimini yokubhalisa. Lokho bonke, ukubhaliswa sekuqediwe. Manje une Kiwi yakho esikhwameni. Isibalo wallet yakho - lena inombolo yakho yocingo, okuyinto ekahle kakhulu - asikho isidingo ukukhumbula noma ukubhala noma iziphi izinombolo eziyinkimbinkimbi futhi eside. Manje uma zitholakala, iyiphi inkokhelo Kiwi esikhwameni. Mayelana nalesi ngokuningiliziwe kamuva.
Indlela yokusebenzisa ikiwi-esikhwameni - izinkokhelo
Ungenza izinkokhelo kokubili inthanethi at terminals Kiwi elise yonke indawo. Ngaphezu kwalokho, kukhona zokusebenza zeselula i-iPhone, i-Android ne-Java, i-kwamanye amadivaysi, okuyinto ekahle kakhulu - esikhwameni elekthronikhi uhlale ephaketheni lakho. Engeza izimali Kiwi esikhwameni elula. Kukhona izindlela eziningana atholakalayo.
Eyokuqala yalezi, ezivame kakhulu - ukwethulwa imali. Ukugwenywa yokukhokha - ruble 15,000 ngokuhamba sokwenziwe olulodwa. Ukuze wenze lokhu uzodinga Kiwi esigungwini. Ngo imenyu ye-ukuphela kudingeka ukhethe "Inkokhelo yesevisi", bese uthi "E-imali" lapho ubona "Kiwi-isikhwama". Wena sikhethe bese gcwalisa ngendlela efanayo njengoba njalo agcwaliswa ngu yeselula. Ungakhohliswa "Kiwi-esikhwameni" okukhethwa kukho kwimenyu enkulu. Uklanyelwe ukwenza imali, kodwa ukusebenzisa isikhwama - Ukubuyekezwa kwe ibhalansi, ekwenzeni izinkokhelo, ngokudlulisela imali.
Indlela eduze ubuyise esikhwameni - ngosizo elikulo lesikweletu kwanoma iyiphi ebhange. Ukuze wenze lokhu kwi-website noma isicelo udinga ukuya ebhange ikhadi ukuphathwa imenyu bese usebenzisa amathiphu ukubhalisa kwakho.
Enye indlela ngokulinganayo elula - ubuyise i-akhawunti esikhwameni kokulandisa nezinye izinhlelo lokukhokha, eliku-intanethi, iselula. Ungasebenzisa isayithi, isicelo lokukhokhela uhlelo ezikhethiwe noma ulandele indawo imiyalelo. Konke iyatholakala futhi kulula.
Manje njengoba wallet yakho inemali eyanele, kubalulekile ukwazi ukuthi ukusebenzisa Kiwi esikhwameni. Ngalo ungakwazi ukukhokhela izindleko eziningi, lapho ngaphambili owawunalo emgqeni ebhange. Nyanga zonke Umbuso izikweletu, inkokhelo-Internet, cable TV, izintela kanye izinhlawulo, nokukhokhwa ezihlukahlukene imidlalo online, izimpahla ezitolo nokunye okuningi itholakala kusukela Kiwi esikhwameni. Ukuze ufunde zonke izici, sicela ufunde website Kiwi. Uhlu lwazo zonke amagama izinkokhelo akunandaba mqondo - cishe konke okudingayo etholakalayo.
Ibhonasi uma usebenzisa Kiwi esikhwameni: uma kukhona inkokhelo kuwe asifanele electronic lokukhokha uhlelo, kodwa kukhona kungenzeka ukukhokha nge-credit card, ama-Kiwis oda ukukhululwa kwe Visa amakhadi. Kungaba efanelekayo virtual inthanethi lokukhokha noma zangempela, plastic, okuyinto kuthanda, phakathi kwezinye amathuba Kiwi esikhwameni.
Indlela ukuhoxisa imali kusuka efonini yakho "megaphone" ngokheshi?
Uyithola kanjani i-imali eyengeziwe: 31 indaba zangempela
Inani lamanje - ekubalweni utshalomali
10 futhi 1 isizathu ukukhipha ikhadi "Ummbila"
Ongakhetha IQ. Indlela nomholo noma ukukhohlisa.
Bezindlu "Arkhangelsk": kanjani lapho? Uphi Museum-esiteyidi "Arkhangelsk"?
Puchkov Dmitry Yuryevich: Biography nesithombe
Ithonya art abantu: agumenti. Izibonelo zokuphila nezincwadi
Izikhangibavakashi Zugdidi, Georgia: incazelo, umlando kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Okuqukethwe izimbuzi ekhaya zizalela
Waterpark e Anapa "Tiki-Tak". Ama ifotho, ikheli, ukubuyekezwa
Ukwelashwa sciatica lumbar.
A ikamu celosia: kulinywe, ukunakekelwa kanye nokusetshenziswa
Wicker isikhwama - hit isizini ihlobo